kubuzwe ngu Garrysch 7 izinyanga ezidlule
kubuzwe ngu Stuart-Dee 5 izinyanga ezidlule
kugcine ukuphendulwa ngu Stuart-Dee 5 izinyanga ezidlule
kubuzwe ngu lwarren7011 5 izinyanga ezidlule
kubuzwe ngu BionicDerriere 5 izinyanga ezidlule
kubuzwe ngu Steve_Sr. 7 izinyanga ezidlule
kuphendulwe ngu Steve_Sr. 7 izinyanga ezidlule
kubuzwe ngu Steve_Sr. 9 izinyanga ezidlule
kugcine ukuphendulwa ngu Steve_Sr. 9 izinyanga ezidlule
kubuzwe ngu terilynn 10 izinyanga ezidlule
kubuzwe ngu bseb1 11 izinyanga ezidlule
kubuzwe ngu amroberts 1 unyaka odlule